कोरियामा एकपटक स्वाद लिनैपर्ने कोरियन खानाहरु, हेरौं केके छन? – Eps Sathi
कोरियामा एकपटक स्वाद लिनैपर्ने कोरियन खानाहरु, हेरौं केके छन?
January 5, 2022 1169
यदि तपाईहरु कोरियामा हुनुहुन्छ र कोरियन खानाको स्वाद लिनुभएको छैन भने तपाईले ठूलो कुरा मिस गरिरहनुभएको छ। सबैजसो कोरियन खानाहरु स्वास्थबर्धक छन। स्वास्थका लागि लाभदायक हुनुका साथै कोरियन खानामा धेरै परिकारहरु रहेका छन। परम्परागत कोरियन खानाहरु विश्वभर चर्चित रहेका छन। तपाईहरु पनि कोरियन खाना एकपटक खाइ हेरौं भन्ने चाहानुहुन्छ भने आज हामी एकपटक चाख्नै पर्ने प्रमुख ५ खानाहरुका बारेमा कुरा गर्दछौं।
फिबिम्फाब : पहिलो नम्मरमा भिविम्फाब रहेको छ। यो खानेकुरा भेज वा ननभेजका रुपमा अर्डर गर्न सकिन्छ। यो खानेकुरामा भात, तरकारीहरु, मासु, खुर्सानीको सस त्यसमाथी अण्डा राखिएको हुन्छ। यो खानेकुराको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुराको यकिन नभएतापनि यसले कोरियाको इतिहाँसमा ठूलो छाप पारेको छ। यस खानेकुराको बारेमा सबैभन्दा पुरानो रेकर्ड सन १६६० को दशकमा रहेको भेटिएको छ। यो खानेकुरालाई कोरियामा आफ्नो पूर्खा वा पितृहरुलाई चढाउनका लागि प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ।
खिम्चि चिगे : यो खानेकुरा कोरियामा धेरै प्रख्यात रहेको छ। कोरियनहरुले यो खानेकुरा हप्तामा एकपटक अवस्य पनि खाने गर्दछन। यो खानेकुरामा मासु विशेष गरी बंगुरको मासु, प्याज, खिम्चि इत्यादी राखि तयार पारिन्छ। यसमा राखिने खिम्चि जति पुरानो भयो त्यति स्वादिलो हुन्छ। खिम्चि कोरियामा धेरै पहिले देखि खाँदै आइरहेको छ। यसको प्रयोग जोसनकाल भन्दा अघि देखि हुँदै आएको रेकर्ड भेटिन्छ।
तकबोकी : यस खानेकुराका बारेमा सम्भवत कोरियामा रहेका जो कोहि पनि परिचित हुने गर्दछन। यो खानेकुरा चामलको पिठोको केक नुडल्स, फिस केक, उसिनेको अण्डा आदि राखि तयार पारिन्छ। कहिले काहिँ यसमा मान्दु अर्थात कोरियन मम तथा गाइको मासु समेत राख्ने गरिन्छ। यो खानेकुरा पिरो हुनुको साथै मिठो हुने गर्दछ। यसलाई कोरियामा नयाँ खानेकुराका रुपमा लिइन्छ।
सामग्यपसाल : कोरियामा एकदमै प्रख्यात रहेको खानेकुरा हो सामग्यपसाल। यो खानेकुरा बंगुरको बेलीको मासुबाट तयार हुन्छ। यो खानेकुराका साथमा धेरै थरी साइड डिस र सोजुका साथमा खाने चलन रहेको छ। कोरियाका विभिन्न कम्पनीका कामदारहरु ह्वसिक अर्थात कम्पनी पार्टीमा समेत यहि खानेकुरा मुख्य गरि खाने गर्दछन। यो खानेकुरा कोरियामा सन १९७० को दशकमा सुरु भएको रेकर्ड पाइन्छ भने सन १९८० को दशकमा कोरियामा बंगुरको मासुको प्रचलन बढ्दै गएपछि यसले थप चर्चा पाएको थियो।
फुदेचिगे : यो खानेकुरा कोरियामा युध्द सकिए लगत्तैबाट खान थालिएको हो। कोरियामा रहेका अमेरिकी वेस क्याम्पमा बढि भएर उभ्रिएको खानेकुराको प्रयोग गरी यो खानेकुरा बनाइन थालिएको हो। यो खानेकुरामा ससेज, गेडागुडी, खिम्चि, चाउचाउ हालेर तयार पारिन्छ। आर्थिक रुपमा गरिब भएको बेलामा यो खानेकुरा खान थालिएता पनि कोरिया अहिले विकसित र धनी भएता पनि यो खानेकुरा खाने गरिन्छ।
Prevअब बारीमा गएर सित्तैमा टि’कटक बनाउन पाईने छैन, एउटा टि’कटकको मूल्य कति ?
Nextअण्डा खाएपछि भुलेर यि ४ चिज नखानुहाेस नत्र हुनसक्छ गम्भिर असर!
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ
जापानमा गुडिरहेको ट्रेनभित्रै आ’गजनी प्रयास गर्ने एक ब्यक्ति प’क्राउ